Iziko lembali ye-Alba efanelekileyo kunye neendawo zokupaka zabucala
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAlessandra E Diego
Le ndlu isembindini we-Alba kubandakanya indawo yokupaka yabucala yasimahla kwintendelezo yesakhiwo. Kufuphi nesikhululo sikaloliwe, iPiazza Duomo kunye neCortile della Maddalena.
Umoya womoya, i-WI-FI ekhawulezayo yamahhala, ukufudumeza, i-2 smart tv, umatshini wokuhlamba (akukho simisi), isinyithi, isomisi seenwele, ishawa.
Ikhitshi elinezitya, imicrowave (akukho oveni yesintu), iketile, umatshini weespresso, umoka.
Igumbi lokulala eliphindwe kabini kunye nebhedi yesofa kwigumbi lokuhlala.
Ngaphandle kukho ibalcony enetafile kunye nezitulo ukonwabela iAperitivo yakho.
Molo kwaye wamkelekile kwigumbi lethu kumbindi weAlba! Sithetha isiNgesi nesiTaliyane. Le ndawo ikwindawo yobuchule eyenza ukuba kufunyanwe indawo yokutya yenkcubeko, yendalo kunye newayini yaseLanghe naseRoero.
Kubandakanywa nendawo yokupaka yasimahla ngaphandle, ngaphakathi kwintendelezo yesakhiwo sabucala, kodwa ngaphandle kwendawo ethintelweyo yase-Alba (ztl). Igumbi elikumgama weemitha ezimbalwa ukusuka ePiazza Duomo, eCortile della Maddalena kunye nesikhululo sikaloliwe / isikhululo sebhasi sikufutshane negrosari kunye nenani elikhulu leekhefi, iibha, iivenkile zokutyela, iivenkile zewayini nokunye!
Kukho ikhitshi lokuhlala eliphangaleleyo, igumbi lokulala elineebhedi ezimbini, igumbi lokuhlambela elineshawa kunye nebalcony enetafile kunye nezitulo ukonwabela iAperitivo yakho.
Ukongeza, ifakwe ngokufudumeza okuzimeleyo, i-air conditioners ezimbini ezizimeleyo, i-2 smart TV ebandakanya iNetflix kunye nevidiyo ye-Amazon Prime, kunye noqhagamshelo lwe-intanethi ye-wifi ye-5ghz engenamkhawulo.
Ekhitshini uya kufumana iketile, umatshini weespresso, imoka kunye nemicrowave (AKUKHO ioveni yesintu). Ngaphezu koko, endlwini, kukho umatshini wokuhlamba (AKUKHO isomisi) intsimbi kunye nebhodi ye-ironing kunye nesomisi seenwele.
4.96 ·Izimvo eziyi-305
Indawo ekwiziko lembali lase-Alba, ekwabizwa ngokuba "yiSixeko esineenqaba ezilikhulu", kuba eyona nto inomtsalane ikumnyango wakho.
Ukuhamba iimitha ezimbalwa ukuya phambili ukusuka kwivenkile ethengisa ukutya, iikhefi, iibhari, iivenkile zokutyela, iivenkile zewayini, kuyenzeka ukuba uthathe inxaxheba kwiminyhadala ephambili apho unokufumana ithuba lokufumana incasa ezahlukeneyo ezinje ngeetruffles ezimhlophe zeAlba, ihazelnuts. , eqhelekileyo "iVino Piemontese" kunye nokutya kwe-italian.
NgoMgqibelo kukho iMarike yamaFama enika ngakumbi ukukhangela kunye nokungcamla.
Umbuki zindwendwe ngu- Alessandra E Diego
Kuya kuba luvuyo kuthi ukukwamkela ngokobuqu kwigumbi lokungena kwaye sikubulise xa uphuma. Sivulelekile ukuphendula nawuphi na umbuzo onokuba nawo nge-airbnb chat.
UAlessandra E Diego yi-Superhost